Ukuguqulwa komzimba ngenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kumfanekiso wowesifazane. Kwaye ngamnye umfazi uhlawula ixesha elininzi kule nkqubo. Emva koko, ngubani oya kuvuya ukujonga izipikili ezingenangqumbo, i-cuticles okanye ii-hangnails. Kodwa i-manicure ayiyona nje umsebenzi wobugcisa, iyenziwa nangenjongo yokucoceka. Uninzi lwesondo olufanelekileyo selunezandla ezininzi kangangokuthi banokuyenza yonke into ekhaya ukuba benze konke okufunekayo kwizandla zabo kwaye bangayi kuma-salon abizayo. Ndifuna ukuphawula ukuba ukunakekelwa kwezandla kunye nezipikili kukulandelelana kweenkqubo ezilula. Kwaye ngamnye umfazi kufuneka afunde ezi ziqhenqa. Andiyi kufihla, ukunakekela i-marigold yinkqubo enzima kwaye ichitha ixesha, kodwa kulungile ukugcina ifom epheleleyo kwaye ikhanya emva kokuphela. Kule nqaku uza kufunda indlela yokwenza i-pedicure kunye ne-manicure ngokuchanekileyo, okanye ukuchaneka ngakumbi, ndiya kukuxelela malunga nokunakekelwa kwesikhombiso esinzima, nokuba kusezandleni okanye kwimilenze.
Isixhobo esibaluleke kakhulu iifayile zekhopi, okanye kunoko isethi yamasiza, kubaluleke kakhulu ukuba ungenzi iphutha ekukhethweni. Labo abanama-marigolds aqinileyo, baninzi, baya kusebenzisa izixhobo zesafire okanye isanti. Kodwa njengokuba uyazi, kungekhona wonke umntu onokuziqhayisa ngezikhonkwane eziqinileyo, ngoko ke sincomela ngezikhonkwane ezingapheliyo ezinokuthi zibe neefayili ezinobuncwane kunye nommandla wokugaya.
Ndide ndilibale, ndifuna ukuphawula, ungakhange ndijonge kwiifayile zetsimbi, sele idlulile. Isiseko sefayilisi ye-nail kufuneka ibe yerubha, kakuhle, okanye kwiimeko zebhodibhodi ezigqithiseleyo, kwaye iifayile zensimbi ziza kushiywa kumadoda ethu. Kwinqaku lethu, siqwalasela indlela yokwenza i-pedicure kunye ne-manicure kwiimodaka ezithandekayo, kwaye kungekhona kubantu.
Ngaphambi kokuba uqale usebenze kwiikhonkwane, qiniseka ukuba zome, kuba izipikili ezimanzi zingaqala ukuhlukana. Kufuneka kukhunjulwe ukuba akudingeki ukuba ucinezele iifayile zekhoyili ngapha nangapha, ukunyakaza kufuneka kube ngokuthe ngqo kwinqanaba elithile, ukusuka kwinqonga ukuya kwindawo. Ubuhle befom, ngokubanzi, kuya kuxhomekeka kwimeko yezipikili, kwaye, ngokuqinisekileyo, kwimeko yeminwe yakho. Kwimeko apho unomnwe omncinci omdala, uya kuhamba ngesimo seempahla, mhlawumbi kungcono ukunamathela kwi-classic version, oval. Ukufezekisa isibuko kungenziwa kuphela ngokuphosa isikhombiso, kwenziwa ngooncedo lweemveliso zecolishing ekhethekileyo, kunye nemifanekiso eprintiweyo kubo, ebonisa ukulandelelana kokubumba ukuphumeza umphumo ophezulu.
Ukususa i-cuticle - ukusuka kule ngongoma ebaluleke kakhulu kwaye uqala ukuguqula umzimba. I-cuticle ingasuswa ngeendlela ezimbini, kodwa kungcono ukhethe indlela engabonakaliyo. Indlela ephilileyo kunye neyobuhlungu ibukeka njengale. Faka isicelo esincinci esithile esikhethekileyo kwi-cuticle, kwaye ulinde ude unxweme lujikeleze umnxeba uphendule kwaye lube lukhulu kakhulu, uze uthathe intonga ekhethekileyo ngentonga yerabha uze uphakamise ngokukhawuleza i-cuticle back, njengokungathi phantsi kwesisilingi.
Ngaphambi kokuba uqale ukususa i-burrs, izandla kufuneka zihlanjululwe kakuhle kwisibhakabhakeni samanzi ngokudibanisa kwe-glycerin, okanye okanye ukuba akukho glycerin esandleni, ungongeza i-teaspoon yetyuwa evamile. Ngoko ke, izandla zazitshisa kwaye zazisula nge-napkin okanye ithayile ecocekileyo, ngoku thabatha i-tweezers ekhethekileyo uze uqale ukususa i-burrs. Kubaluleke kakhulu ukuba amaqhekeza atholakala kwi-pependicular to the skin. Ewe, kwaye ngaphambi kokuba le nkqubo ingenakuchukumisa ukutshabalalisa i sixhobo - kuya kuba yinto elungileyo, kuba awaziwa ukuba zininzi izilwanyana ezincinci kwisixhobo, kwaye ukubazifake kwisilonda esinokubunjwa ngexesha lokususwa akuyona into emnandi kakhulu. Emva kokuba wenze konke, sula amanxeba amancinci ngesisombululo sokuxhatshazwa.
Isigaba esilandelayo siya kusebenzisa i-varnish. Okokuqala, sisebenzisa i-verarn-basis, ngenxa yolu hlobo umbala uya kuzaliswa kwaye kwaye. Ngokuqhelekileyo idla ukusuka kumithathu ukuya kwemizuzu emi-5. Emva koko ukhethe umbala uze usebenzise i-lacquer eyona nto. Xa usebenzisa i-varnish, yenza ngokucophelela, ungasebenzisi ngokukhawuleza uninzi lwe-varnish, kukulungele ukuyisebenzisa kwiindlela ezi-2-3, ukwenzela ukuba umphezulu uphinde ungabi namabhule. Ukuze i-varnish yome ngokukhawuleza, unako ukubamba iminwe yakho ngaphantsi komlambo wamanzi e-ice.
Khetha i-varnish kunye nesimo sesilumko kunye nephunga lesikhumba. Ngenqaku le-bluish, i-varnishes ifanelekileyo kubasetyhini busika okanye uhlobo lwehlobo. Ukuba umthunzi wesikhumba uluhlaza, ngoko uya kuneliswa ngemibala ebomvu okanye ebomvu. Ngumlenze oboyiweyo we-almond, imibala emnyama kunye nemitha iyamkeleka. Iipilisi azizona zonke ezifanelekileyo, zikho iziphoso kunye nezitenxo, kulo mzekelo, ungasebenzisi i-pearl lacquer, kuba zonke iingxaki ezincinci ziza kubonakala ngakumbi. Kukho enye inkohliso onokuyibonakalisa ukuba yenze iipilisi ezide-oko kukuthi, sebenzisa i-nail polish kwi-nail, kodwa ungapendeli ngaphaya kwemida, kwaye ubonise ukuba kuya kuba yinde.
I-pedicure manje inexabiso elikhulu lobugcisa. Ukuba ngaphambili ukuze uyenze, kwafuneka ulinde isiganeko esifanelekileyo (umzekelo, iholide), namhlanje i-pedicure yinkqubo enyanzelekileyo kwanoma yimuphi ummeli wesifazane. Ingakumbi ukuba ididi ishushu ehlobo. Kwaye kunjalo! Emva kwakho konke, uthatha iinyawo zakho zivale izicathulo kwaye unomdla ozibekayo ngeembadada ngeminwe evulekile. Kodwa indlela ekhangeleka ngayo kule meko, i-e-well-groomed and neatly peinted neils on the legs!
Inkqubo yokwenza i-pedicure ayinzima kakhulu, inokwenziwa ekhaya.
1. Okokuqala, kufuneka uhlolisise iipilisi kwimilenze, ukuba ikhona i-vernish endala, uyisuse ngokucokisekileyo, udibanise uboya bekotoni kwi-pilisi ye-polisi okanye ususe i-acetone.
2. Isigaba sesibini se-pedicure siya kuba ngamanzi eshushu: uthele amanzi afudumele kwisitya, faka ilwandle elwandle ityuwa kunye nemilenze yethu imizuzu engama-20.
Emva kokuba uqhezule iinyawo zakho, zitshintshe zibe zomileyo kwaye uhlolisise iinyawo zeengqolowa okanye iinkozo. Ama-hemorrhoids angabonakala kulawo mabhinqa anxiba izicathulo eziphezulu. Oku kukuqiniswa kwesikhumba, esinokubandezeleka ngamanye amaxesha. Kwisikhumba esinamanzi, esi siphene siya kuba lula ukukususa. Ngoko, kufuneka uthathe iifayile zenyawo ezinqabileyo okanye ilitye elikhethekileyo, kwaye uqale ukugawula le tywina. Kodwa apha akufuneki ukuba nethemba kwizinto ezibonakalayo, umntu kufuneka aphulaphule iimvakalelo, kuba kunokubonakala kwiso ukuba akukho nto iyakususwa, kodwa ngokwenene, i-nattochish iya kuba, kwaye kungekudala iza kukhula kwakhona. Ngendlela efanayo, ufanele uphinde uphilise isithende, isithende sifanele sigxile kwi-touch. Kukho iingxaki ezifana nokuqhekeka kwizithendeleko, oku kungenxa yokunyamekela okungafanelekanga, ngoko ukutyunjwa kufanele kuphathwe ngandlela-thile uhlobo lwe-disinfectant kunye ne-agent agent. Emva koko konke okwenziwe, kufuneka uphinde uhambe ngeengxaki zengxaki, kodwa ngoncedo lwefayili encinci, ukuze ugweme ukugqithisa.
4. Akukho mfihlo yokuba ngenxa yezicathulo ezincinci kwiminwe encinci, iinkozo ezinzima zingabonakala, kunye nakwiingcebiso zeminwe - imihlathi yesikhumba. Kwakhona kufuneka baqwalaselwe ngokucophelela ngefayile yekhonkwane.
5. Emva kwezi nkqubo, sihlambulula imilenze kunye nekhefu ekhethekileyo, kunye nemichiza elukhumbeni kunye nekhekhe ekhethekileyo.
6. Isinyathelo esilandelayo se-pedicure siya kusika izipikili, apho siza kufuna iimpumba ezizodwa. Emva koko izipikili mazifakwe kwaye, xa kwenzeka ukungalingani, kuphucuziwe.
7. Isinyathelo esilandelayo kukususa icandelo. Kodwa ngokubanzi i-cuticle kwiingalo nasemilenzeni ayifani ngokukodwa, ngoko ke senza okufanayo njengoko kuchazwe ngasentla.
8. Emva kokuba ulethe imilenze yakho ngokufanelekileyo, akuyi kuba yinto enqabileyo yokwenza umququ weenyawo okanye ukukhangela. Inani elincinci lemali kufuneka lihluthwe ngenyawo kunye nokunyakaza kwamathambo. Kufuneka uhlawule ngokukodwa ezo ndawo apho kwakukho i-burrs, corns kunye ne-hornfels. Ulusu lonyawo luba lula kwaye lukhulu ngakumbi ngenxa yokuba oku kuthetha ukuthatha i-ecidermis. Emva koko, sukuma imilenze ngamanzi afudumele uze uyisule. Akuyi kuba yinto enqwenelekayo ukuyifaka nge-menthol ukupholisa iinyawo eziphazamisekile, ezifanele zigcinwe zingekho ngaphezu kwemizuzu engama-15. Emva kokuba ixesha lidlulile usule imilenze kunye nezikhala phakathi kweminwe uze uhlambe iinyawo ngekhilimu.
Nazi apha iingcebiso ezilula ziyakunceda ukuba wenze i-manicure kwaye uyenze ukunyamekela imilenze, enokuthi ibonakale ikhangeleka. Emva koko, intombazana enhle imele ibe yinhle kuyo yonke into - ungayikhohlwa malunga nayo! Yaye ubuhle beempiki kulo mcimbi akukho kwindawo yokugqibela!
Izipikili eziphathekayo, ubusika 2015 -2016: iifoto zezinto ezikhethiweyo zeendlela zokwakheka kwesikhonkwane, iAntumn-Winter 2015-2016
Ukuqhafaza ekhaya kwindlela yokwenza okulungileyo
I-pizza ne-broccoli, anyanisi kunye nemifuno emnyama
Umzali hyperopece: iimpawu ezintathu zokuxhalabisa
Awukwazi ukuphula ulwalamano lokugqithisa ngokweqile
I-kroti ishicilela ngeshizi
Ziziphi iingxaki zokubhala kwakhona?
Jam ukusuka kumthi womthi
Izitya ezilula kakhulu zaseTaliyane
Isifo seBronchoectatic: unyango lwamayeza oluntu
Kutheni ndifuna i-bandage kumfazi okhulelwe?
Izizathu zokungaphantsi komzimba
Ukuhambelana komhlaba kunye nolwandle: umgca wokuguga u-L'occitane Divine Harmony
Ukusetyenziswa kwe-oregano kumayeza emveli
Ngaba ndimele ndithethe?
Kukuphi ukutya okulungileyo kwimpilo yakho?
Indlela yokugubungela ingubo yomkhonto